Gịnị bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe ịzụta? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Kedu ihe bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ihe bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe - ngwọta na-adịgide adịgide
Gịnị bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe ịzụta?
Bikgbọ okporo ígwè ndị kachasị mma maka ịgba n'okporo ụzọ dị larịị.
Ugba igwe ugwu kachasị mma maka ịnya n'okporo ụzọ.
Ngwakọta ngwakọ bụ nhọrọ a ma ama makaigwe kwụ otu ebendị njem, ekele maka ntụgharị ha.
A na-ewukwasị ịnyịnya ígwè maka ụzọ ndị na-erughị njem, ma na-emekwa ndị njem mara mma maka okporo ụzọ obodo ndị siri ike.
Kedu igwe igwe kachasị mma ị nwere ike ịzụta? Um Naanị nke abụọ, n'eziokwu. (egwu na-ada ụda) N'ụzọ doro anya, nke ahụ bụ n'ezie ajụjụ siri ike ịza.
Ọ bụghị n'ihi na ọ bụ n'ezie ike ịchọta a oké igwe kwụ otu ebe, ma n'ezie n'ihi na ihe kasị mma igwe kwụ otu ebe na-adabere kpamkpam na gị, na onye na-agba. Kama ịjụ ihe igwe kwụ otu ebe kachasị mma, anyị kwesịrị ịjụ kama kedu ka ị si azụrụ gị igwe kachasị mma? Ọfọn, isi okwu mbụ n’ịzụ igwe kwụ otu ebe kacha mma bụ n’ezie ihe izizi iji jide n’aka na ọ dabara maka mkpa gị. Ugbu a, ka anyị lekwasị anya na nkwụsịtụ ebe a.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga n'okporo ụzọ, tụlee ịzụ igwe kwụ otu ebe. Ugbu a cyclocross ma ọ bụ gravel anyịnya igwe dị ka ndị a bụ incredibly vasatail na oké fun anya-ụzọ dị ka ogologo dị ka ọ na-amị amị. N'ezie, ịgagharị n'okporo ụzọ na-aga adrenaline, agbanyeghị, taya ndị mara abụba na igwe kwụ otu ebe bụ naanị ihe ọ funụ.
Are naghị adịkarị mfe nkwọ na okwute na mgbọrọgwụ, yabụ na ị na-anyafe nke ọma karịa, na-anya ngwa ngwa ma dịkwa obere li. dị kely iji nweta taya dara ada. Gini banyere gravel ma obu cyclocross igwe kwụ otu ebe? Ọfọn, ha dị ka igwe kwụ otu ebe, ọ bụ ezie na ha dị nwayọ nwayọ karịa otu igwe.
Ọfọn, nke a nwere ike ọ gaghị adị gị mkpa, mana ọ bụ eziokwu. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgba ọsọ n'okporo ụzọ, ịkwesịrị ịzụta igwe ịgba ọsọ. Maka ihe ọ bụla ọzọ ma igwe kwụ otu ebe a nwere ike izu oke.
Nwere ike ịmakụ taya buru ibu karị, gaa ịgagharị, na-agba ọsọ n'okporo ụzọ ndị ị na-agaghị ejikarị osisi ụgbọ mmiri, na igwe kwụ otu ebe. Ndị a dịkwa oke ike na aka, yabụ na ị nwere ike iji obi ụtọ na-anya ụgbọ ala na-arụ ọrụ kwa ụbọchị n'oge oyi na oche nwata na-arapara n'azụ gị. Ọ bụ ezigbo ọrụ ọrụ.
N’ịtụle na ọ bụghị ọtụtụ n’ime anyị na-agba ọsọ n’ezie, ọ nwere ezi uche ịzụta igwe ịgba ọsọ? “Oh ee, e nwere n'ezie a isi na-azụ a ụzọ igwe kwụ otu ebe. Ha dị ngwa ngwa, nke pụtakwara na ọ dị mfe ị na-aga y ọbụlagodi na nke ahụ bụ akpa gị. Ha na-emeghachi omume, ha dị ndụ karị, ha na-arị elu nke ọma, ha nwere ike ịga ala ala karịa, ha nwere ike ịgbanwe ụzọ na-enweghị atụ n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọ bụ ntakịrị ụgbọ ala egwuregwu, mana maka ọnụ ahịa nke mgbakwunye, ọtụtụ igwe kwụ otu ebe nwere ike ịnya gravel karịa ka ị chere. The ọzọ dị mkpa mgbe, ma ọ bụ ọbụna mbụ anyị na-enweghị ike ikpebi, bụ nri kwesịrị ekwesị, incredibly dị mkpa na-achọta ihe kasị mma igwe kwụ otu ebe n'ihi na ị. Ugbu a ị gakwaghị etinye ego na ọkachamara igwe kwụ otu ebe dabara adaba.
Ọ bụrụ na ị na-azụta site na ụlọ ahịa a ma ama, ha kwesịrị inwe ike inyere gị aka ịchọta oke. n'ụzọ ziri ezi, ga-elekwasị anya na ịdị elu nke sadulu. Nke a dị mfe ịgbanwe.
Ya mere, ihe nwere mmetụta dị ukwuu na igwe kwụ otu ebe ziri ezi bụ iru nke aka ahụ na ịdị elu ha. Yabụ ọ bụrụ na inwere ma ọ bụ karịa ma ọ bụ karịa, ị ga-enwe ike ịzụta igwe kwụ otu ebe nke nwere ike inye gị nke ahụ. Yabụ ụdị ịnyịnya ibu nke ụdị ntachi obi, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ogologo, ogologo agbatị, ị nwere ike ịchọta igwe ntachi obi enweghị iru ala.
Yabụ ị ga-ahọrọ igwe kwụ otu ebe ọdịnala, nke dị fechaa, ma ọ bụ nke nwere akụ. N'oge gara aga, fechaa bụ naanị ihe niile na-akwụsị mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe. Mkpa ọkụ anyịnya igwe na-ngwa ngwa.
Ma ọ bụ na ha bụ n'ezie ruo mgbe aerodynamic anyịnya igwe wee, na nyochawa ha ugbu a ngwa ngwa na ọ fọrọ nke nta niile ịnyịnya ọnọdụ. Ma ha dịkwa oke ọnụ, yabụ ọnụahịa na ọnụ ala dị ala kwesịrị ịbụ otu n'ime ihe ndị ị ga-atụle. Dị ka m kwuru, ọkụ anyịnya igwe na-adị ngwa ngwa ma na-azaghachi, ha na-arụkwa ọrụ nke ọma. (egwu obi ụtọ) Enwere nhọrọ anọ.
Nchara, titanium, aluminom na eriri carbon. Enwere ike wuo onye ọ bụla n’ime nnukwu igwe kwụ otu ebe, onye ọ bụla ga-enwe ndị na-akwado ya. Na obere mmefu ego, okpokolo agba ga-abụ ihe kachasị mkpa gị.
Ya mere, ọnụ ala nchara bụ ezigbo arọ, ma ọ na-ele n'ezie siri ike na n'ezie siri ike; aluminum bụ Mkpa ọkụ, mgbe ahụ, carbon eriri, n'ozuzu Mkpa ọkụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-anwa ime ka ịwụda ya na ikuku carbon dị ka o kwere mee, ana m eche na igwe kwụ otu ụlọ nke aluminium maka otu ọnụahịa na-abụkarị nhọrọ ka mma, na ọtụtụ nke ahụ gbadara sekit ahụ. Ngwongwo ndị dị oke ọnụ na-arụ ọrụ nke ọma ma dị nro, ihe ruru euro 1,000, dollar, akara paụnd maka igwe kwụ otu ebe.
Na mgbe ahụ, ha na-enwu ọkụ, ma e wezụga, nke elektrọnik, nke na-arụ ọrụ nke ọma. Ha na-eme, gbaghara m. Ugbu a, ọnụ ọgụgụ gia ekwesịghị ịbụ nnukwu nsogbu.
Ewezuga na obere ihe na-aga n'azụ na-apụtakarị arụmọrụ ka njọ na ibu ibu dịtụ elu. Wheels na taya nwere ike imetụta ma ọ bụ mebie ogo nke ịnya ịnyịnya. Ya mere ezigbo, setịpụrụ ọkụ nwere ike inwe mmetụta mgbanwe na igwe gị.
Ya mere, mgbe ị na-azụta ihe ọhụrụ, gbaa mbọ hụ na ị attentionara ntị n’ihe ọ na-ekwu na ya, na ikekwe ị na-achụ ụfọdụ àjà n’ebe ọzọ na igwe kwụ otu ebe ka ị nweta nke taya dị egwu ihe ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe ịchọrọ ịzụta bia jiri sadulu ị na-enweghị mmasị, ka ọ bụ obere mkpịsị ụkwụ na eriri? Change na-agbanwe ha. Nke a bụ ihe ị tinyere n'akụkụ karịa na mmefu ego, ma eleghị anya ịzụrụ otu setịpụ ụkwụ na-adalata ma ọ bụ ịzụta aka nwere ụdị dị iche ị masịrị nwere ike ime nnukwu ihe dị iche na igwe. N'ihi ya, gbalịa ka otu akụkụ ma ọ bụ abụọ nke ihe nwere ike ịbụ nke kacha mma ịnyịnya gị ghara ịhapụ gị. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụ ọdịdị nke igwe kwụ otu ebe gị, ọmarịcha mma ya.
Echere m na ọ nwere ike ịdị elu karịa na ndepụta anyị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dịghị ada ka ụzọ kachasị mma iji họrọ igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ n’ị hụrụ igwe igwe n’anya n’anya n’ezie, ọ bụrụ na ọ na - eme ka obi gị daa ngwa ngwa oge ọ bụla see hụrụ ya, yabụ n’anya m ọ bụ nnukwu igwe kwụ otu ebe ma enwere ike ịgbaghara ya maka adịghị ike ya niile ma ọ bụrụ na ị na - ele ya anya oge ọ bụla ị chọrọ ịga maka igwe kwụ otu ebe. Ọ bụ nnukwu igwe kwụ otu ebe.
Ugbu a na-aza ajụjụ n'okpuru n'okpuru ka anyị mara ihe ị na-eche bụ ihe kasị mma igwe kwụ otu ebe n'ihi na ị, gịnị mere na ihe ọ bụ n'ezie? Wee debanye aha na GCN kwa. Iji mee nke a, pịa na ụwa. Ọ bụrụ na ị na-achọkwu ọdịnaya nwere ike inyere gị aka ikpebi ihe igwe kwụ otu ebe kacha mma, anyị nwere nnukwu isiokwu n'akụkụ ebe ahụ bụ Endurance Bike na Arrow Bike vs Lightweight Bike.
Ego ole ka ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Anyịnya igwe anyị nwaleworoegosite n’ihe dị ka $ 300 ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 2,000. Anyị chọpụtara na ego na-azụta igbe dị fechaa nke nwere eriri carbon, aluminom (ma ọ bụ ngwakọta nke ihe abụọ ahụ), ma ọ bụ nchara dị elu na ihe ndị ọzọ nwere ogo. Mana ị ka nwere ike ịzụta aezigbo igwe kwụ otu ebemaka naanị narị ole na ole dollar.Eprel 14 2016
Ndị a bụ ndị a na-ahụkarị na igwe kwụ otu ebe ma na-enye gị ohere iwepu ma ọ bụ dochie wiilị ndị ahụ na aka na-enweghị ngwaọrụ, mana nke ka mkpa bụ na ha bụ ihe ngosipụta maka ebumnuche nke igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na a ga-apụghị izere ezere taya dị larịị mgbe ị na-agba ịnyịnya ugwu, ọ bụ nsogbu na ịnwe ngbacha 15mm mgbe niile ka ị wepụ mkpụrụ ndị a. Nke ka njọ, igwe kwụ otu ebe na mkpụrụ osisi na axles fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịkwalite wiilị, na wiilị bụ otu n'ime ihe ị ga-eto karịa ka ị nwetara ahụmịhe.
Ọbụna ọnụ igwe diski dị ọnụ ala nwere ike gbanwere maka ndị ka mma, nke dị mkpa ịmara n'ihi na igwe kwụ otu ebe ga-enwerịrị isi mgbakwunye maka ikike a site na mmalite. Nke ka mkpa bụ na breeki breeki bụ ihe a tụkwasịrị obi karịa brek brek, ọ bụ ya mere ugwu igwe kwụ otu ebe jiri gbanwere ngwa ngwa ma kpebisie ike ịgbanwe ha ọtụtụ iri afọ gara aga. Ebe ọ bụ na ezigbo igwe kwụ otu ebe kwesịrị ịdị obere ma kwalite nkwalite, mmadụ kwesịrị inyo enyo nke ukwuu na-enweghị igwe breeki.
Ma ọ gwụbeghị. You na-anụ ụda olu m niile kụrụ aka ebe niile, ma n'ezie ọ bịara kpamkpam n'ọtụtụ mmiri na mmali. Iji dozie nke a, m wụnye usoro nduzi nke kpochapụrụ nsogbu ahụ.
Nke a ga - efu gị ihe dị ala karịa ịkwalite ụgbọala gị, nke nwere ike ịgba gị ọsọ dịka igwe kwụ otu ebe a. Ọ bụrụ na m bụ onye mbido iji nweta dị ka o kwere na igwe kwụ otu ebe a, m nwekwara ike ịkwalite pedal na ma eleghị anya ndụdụ ahụ na ihe yiri nke ahụ, ka mma ree ya ma melite ihe niile. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na i nweela igwe kwụ otu ebe ma chọpụta na ọ dara ụfọdụ n'ime ule ndị a, ị ka nwere ike irite uru site na edemede a.
Kedu ihe na-eme igwe kwụ otu ebe ka ọ bụrụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
.B.Oke igweB A RB MACR R AKA A NA-ANAP RTA
Ọ dịkwa mkpa na ndị mmadụ nwere ike ịnya ịnyịnya n'ọnọdụ dị mma ka ha wee banyeigwe kwụ otu eben'oge ọ bụla n'ụbọchị n'agbanyeghị ihe ha na-eyi. N'ime obodo na ibuanyịnya igwe, ihe ndị m chọrọ kacha bụ njigide dị mma, ụgbọala na-adọkpụ nke na-adịchaghị mma, yana taya na-adịgide adịgide.Eprel 13 2020
Kedu ka m ga-esi họtara anyị igwe kwụ otu ebe kachasị mma?
Kpebiena ọkwa nkasi obi ị chọrọ.
Họrọugwuigwe kwụ otu ebema ọ bụrụ na ị na-amasị na-aga n'elu nnukwu bumps na unyi.
Họrọn'okporo ụzọ ma ọ bụ ịgagharịigwe kwụ otu ebema ọ bụrụ na ị na-agba na ọtụtụ ụzọ dị larịị na mbara ala.
Ngwakọanyịnya igwedịezima ọ bụrụ na ịchọta nkasi obi ọzọ na ịnọdụ ala kwụrụ ọtọ ma chọọ ịnya akwa.
Igwe igwe dị oke ọnụ ọ nwere ihe dị iche?
Na mkpokọta okwu, more-ọnụ igwe kwụ otu ebedị ọkụ, sie ike karị, ma nwee akụrụngwa ka mma. Nke ọzọ kasịnụihe dị ichen'etitiọnụ igwe kwụ otu ebena obere-dị oke ọnụụdị ndị a dị mma, nke nwere eriri carbon-fiber na-agbakwunye okpukpu abụọ na atọ.Ọgọst 4 2017
Gịnị mere ịnyịnya ígwè ji atọ ụtọ?
Ọ na-eme ka ọrụ nkịtị bụrụ ihe ị nwere ike ịnụ ụtọ.Obi utobụ obi ụtọ na mkpali. Na otu ihe onye ọ bụlana-agba ịnyịnyakaigwe kwụ otu ebega-agwa gị na ọ bụịgba ígwèbuọchị. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-amalitena-agba ịnyịnyakaigwe kwụ otu ebena-enwe ya - ọ amuses n'ụzọ ụfọdụ na-aga n'ihu na-eme otú ahụ mgbe niile.
Bikgba ígwè ndị dị oke ọnụ na-aga ngwa ngwa?
Ná nkezi, ee,igwe ndị dị oke ọnụ na-aga ngwa ngwa. Naa n'ihianyịnya igwekarịa n'ihi ndị na-agba ha. Ndị na-agba ịnyịnyaọnụ igwe kwụ otu ebena- (ọzọ na nkezi)Ọzọnwere ike ịgba ọsọ, zụọ n'usoro, ma gbagoo ogologo ụzọ. Haimeonwe ha ka mma motors karịameendị na-agba ịnyịnya ibu.
Eeh. Dị ọnụ ala karịaanyịnya igweanaghị enwekarị ike ịnọ ogologo oge. Agbanyeghị, ahụrụ m ọtụtụ mmadụ nwere otu $ 99igwe kwụ otu ebena ụgbọala ha maka afọ 10, 20. Ọ bụrụ na ịzụta $ 50igwe kwụ otu ebena ị na-agba ịnyịnya ya otu ugboro ọ bụla afọ ise, n'aka, ọ kwesịrị ịdị gị afọ 10.13bọchị 13 2019
Gịnị mere enweghị igwe kwụ otu ebe?
Ebe ahụbụ nnoo ihe abụọ kpataraigwe kwụ otu ebeụkọ. Nke mbụ,enweremmụba a na-arịwanye elu n'ihi ọrịa ahụ na-efe efe. Ndị mmadụ na-agakarị agagharị n'ihe omume ụlọ n'ụlọ ahọrọla ihe omume ntụrụndụ ọhụrụ n'èzí. N'otu oge ahụ,enwereụkọ ọkọnọ.04/16/2021
Gịnị mere na e nweghị anyịnya igwe na ngwaahịa?
Ọ bụ ezie na COVID-19 emebisịlarị agbụ ígwè na mgbanwe ndị ahịa gbanwere gafee ụlọ ahụ, otu n'ime ụlọ ọrụ ndị kachasị nwee nsogbu bụigwe kwụ otu ebeụlọ ọrụ. Ina makaanyịnya igwerịa elu n'etiti ọrịa ahụ na-efe efe, na-akpali ụwa niileigwe kwụ otu ebeụkọ nke egosiriọ bụghịihe ịrịba ama nke mfe.31.01.2021
Kedu ihe na-eme ezigbo nhọrọ maka igwe kwụ otu ebe?
Ofnyịnya ị na-ahọrọ ịhọrọ ga-adaberekwa na mmasị nke aka gị, yana ụdị ebe dị anya na mbara ala ịchọrọ ịbanye. E nwere ọtụtụ ụdị ịnyịnya ígwè na ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ga-eme ka ị nweta ebumnuche gị.
Kedu ugwu igwe kachasị mma ịzụta?
Schwinn High Timber Youth / Adult Mountain Bike, Aluminom na Steel Frame Options, 7-21… Dynacraft Magna Front Shock Mountain Bike Boys, Girlsmụ agbọghọ, Mens na Womens 24 na 26 Inch Wheels… Schwinn Meridian Adult Tricycle, Three Wheel Cruiser Bike, 24 - 26-Inch Trike Wheels, Ibu…
Kedu ụdị igwe igwe kwụ otu ebe na-ere igwe kwụ ọtọ?
Obi ga-adị gị ụtọ na i mere. Ezi igwe kwụ otu ebe bụ onye na-ere ahịa ịnyịnya igwe enyere ikikere. Anyị na-ere anyịnya igwe, akụkụ, na ngwa site Trek, Bontrager, Salsa, Surly, Electra, Fox, na Rock Shox. Ugbu a na-emeghe naanị maka ndị na-eto eto na-ewepụ na obi ụtọ n'èzí.